Vivo waxay TENAA ku soo bandhigeysaa Taleefan Casri ah oo kale oo Saddex-Sedexley ah | Androidsis
Vivo waxay TENAA u soo bandhigeysaa taleefan casriyeysan oo saddex-kamarad kale wata
Vivo waxay u egtahay inay joogitaan aad u badan ku sameyso barxadda TENAA, oo ah hay'ad sharciyeynaysa Shiinaha oo caddeynaysa taas oo dhammaan taleefannada casriga ah ee halkaas lagu suuq geyn doono ay ka gudbaan.
Shirkaddu waxay hadda ku soo noqotay bartamihii dareenka iyada oo ay ugu wacan tahay soo galitaanka qalab isaga u gaar ah oo ku jira keydka xogta hay'adda. Midkani wuxuu la muuqday a kamarad gadaal seddex ah iyo astaamaha caadiga ah iyo qeexitaanada terminal dhexdhexaad ah. Marka xigta waxaan soo bandhigi doonaa wax badan oo ku saabsan moobilkan.
Taleefanka casriga ee cusub ee layaabka leh ee Vivo ee lagu qabtay barxadda TENAA ayaa lagu diiwaangeliyey magaca lambarka 'V1921A'. Tani, sida ku cad macluumaadka ka muuqda liiska, wuxuu la yimaadaa shaashad AMOLED 6.38-inji ah oo leh FullHD + qaraarka 2,340 x 1,080 xalka pixels, sidaa darteed waxaan heli doonnaa qaab soo bandhigid cidhiidhi ah oo horeba u ahaan jiray 19.5: 9.
Muuqaalka dhinacyada Vivo V1921A ee TENAA
Qeexitaannada kale iyo astaamaha casriga cusub ee soo muuqday waxaa ka mid ah laba ikhtiyaar oo loogu talagalay RAM iyo saddex kaydinta gudaha ah, kuwaas oo kala ah 6/8 GB iyo 64/128/256 GB, siday u kala horreeyaan. Sidaa darteed, waxaan noqon doonaa kuwo mudan noocyo badan oo xusuusta ah, mar ay si rasmi ah suuqa u gaadho.
Processor-ka ay qalabeyso waa octa-core oo ah 2.3 GHz inta jeer ee ugu badan. Tani waxay mas'uul ka noqon doontaa soo dejinta interface-ka Android Pie taas ayaa horay loogu sii rakibay mobilada, taas oo hubaal ku imaan doonta rinjiga hoosta soosaaraha Shiinaha ee lakabka u gaarka ah, oo ah FunTouchOS. Si loo guuro waxaas oo dhan, batari awooddiisu tahay 4,420 mAh ayaa ah waxa la doortay.
Vivo Z1 Pro: Nooca cusub ee nooca dhexe ee dhexdhexaadka ah
Ugu dambeyntii, Taleefanka casriga ah ee Vivo ee aan weli ogayn ayaa lagu dhajiyay bogga isagoo madow ah. Tan ka sokow, sharraxaaddeeda waxay muujineysaa in kaliya nooca midabkan la heli karo. Taa baddalkeeda, taariikhda ay bilaabeyso iyo helitaanka suuqa, iyo sidoo kale qiimaheeda, weli waa la ogaanayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Vivo waxay TENAA u soo bandhigeysaa taleefan casriyeysan oo saddex-kamarad kale wata
TikTok waxaa loo baarayaa qaabka ay xogta uga aruuriso carruurta